Halkeey marayaan wadahadalada Arsenal iyo Dortmund ee Pierre-Emerick Aubameyang (La soco) – Gool FM
Halkeey marayaan wadahadalada Arsenal iyo Dortmund ee Pierre-Emerick Aubameyang (La soco)
Liibaan Fantastic January 25, 2018
(Dortmund) 25 Jan 2018 Wadahadalada Arsenal iyo Borussia Dortmund ayaa ah wali kuwa socda, inkasta oo labada dhinac ay is mari la’yihiin ilaa haatan.
Wariyaha Sky Sports ee Guillem Balague ayaa sifiican u faah faahiyay sida haatan ay u socdaan wadahadalada Arsenal ay ku doonayso Pierre-Emerick Aubameyang.
Guillem Balague ayaa sheegay in Arsenal ay meer meeris ku wado wadahadalada maadama aysan ku qanacsanayn qiimaha Dortmund ay ku qiimaysay Aubameyang.
Weerar yahanka reer Gabon ayaa runta u sheegay kooxdiisa taas oo ah inuusan doonayn inuu markale u ciyaaro, laakiin Dortmund ayaa doonaysa in la siiyo 65 ilaa 60 milyan oo euro.
Aubameyang ayaa ka doonaya Arsenal inay soo dhawaadaan isla markaana ugu yaraan ay wax yar uun u soo jirsadaan qiimaha Dortmund ay isaga ku qiimaysay, wuxuuna ka doonayaa Gunners inay dadajiso heshiiska.
Arsenal ayaa kalsooni buuxda ku qabta inay dhamaystiri karto saxiixa balse Aubameyang ayaa ka doonaya inay dhamaystiraan ka hor sabtiga si uusan ugu ciyaarin kulanka soo socda.
Waxaa jira warar kale oo sheegaya in Borussia Dortmund ay ka caraysan tahay gaabiska Arsenal ay ku wado wadahadalada maadama la rabay in waqti hore la dhamaystiro saxiixa, waxaana suurogal ah inay ka baxaan wadahadalada haatan ay kula jiraan Arsenal.
Caawa ilaa barri ayaa la filayaa inay wax ka soo cusboonaadaan wadahadalada, maadama Arsenal ay gudbinayso dalabkeedii 3-aad oo uu ku jiro Giroud oo amaah ugu biiraya Borussia inta ka harsan xiliciyaareed kaan.
Jose Mourinho oo qiray in qaab ciyaareedka Arsenal uu caawin doono Henrikh Mkhitaryan
Cristiano Ronaldo oo Fariin dhiiro galin ah u soo diray Real Madrid iyo Taageerayaasheeda